Ezweni elifashisayo, azikho izinwele eziningi kakhulu eziya cishe wonke umuntu, ukushaya izinwele kunomunye wazo. Ubukeka kahle emagcekeni kwanoma yisiphi isakhiwo futhi unike ithuba lokuveza ngokuphumelelayo izinwele ezinzima kakhulu nezincane. Kodwa-ke, ngezinwele ezinzima ezinzima ngosizo lwekhanda elinjalo ungakwazi ukufeza ivolumu enhle kakhulu. Kodwa ngaphambi kokwenza ukhetho lokugcina, udinga ukuqonda ngokuningiliziwe ukuthi yikuphi ukuhlaselwa, yiziphi izinhlobo zezicathulo ezikhona, nokuthi ubani ohamba naye.
Ngokusekelwe egameni, ungaqonda ukuthi yini ehlukanisa ukunqunywa kwezinwele kwezinye zezinwele. Akukho mfihlo ekusetshenzisweni kwayo, inqubo yokusika izinwele ezakhiwe eminyakeni engu-70 yekhulu lokugcina, kusukela ngaleso sikhathi akukho lutho olushintshile kakhulu. Kusukela ku-vertex, ama-curls akhiwe ezendeni, ezakha izinyathelo zokuqala noma "amagagasi".
Kunezinhlobo eziningana ze-cascade, zikhishwa kusuka ezindaweni ezihlukahlukene. I-haircut ingaqaliswa kusukela phezulu kwekhanda, kodwa ungazikhawulela ekushintsheni okuncane okulula. Ngezinye izikhathi i-cascade ibizwa ngokuthi isiteji, kodwa lokhu akulona iqiniso.
Izinhlobo zezinwele zezinwele
Ukuhlaselwa izinwele ezinde kwenziwa ngezinguqulo ezimbili:
Kulungile - lokhu kukhanda kuncike ngosizo lwemigqa eqondile, kuyilapho izinsimbi zifakwe ngendlela efanayo.
Ukukhuphuka okukhulu - ama-curls kuleli fomu lokusebenza alifani. I-haircut ibukeka isitayela futhi ifanelekile.
Izinwele ezingekho ngaphansi kwezinwele zikhishwa izinwele ezimfushane. Ukukhanda izinwele kulokhu kubonakala kubonakala kunemfashini futhi kungahlobisa owesifazane kunoma yimuphi ubudala. Ukuzikhethela izinwele ezinjalo, udinga ukwazi ukuthi inkosi kufanele yenza ushintsho olubushelelezi. Amantombazane asebancane akhetha i-cascade ephukile. Kodwa ngekhanda lokugcizelela ubuhle, kubalulekile ukukhetha inkosi enolwazi othanda umsebenzi wakhe.
Ngokuvamile, ukunqunywa kwezinwele kukhishwa ngezinwele ezinde. Kulolu daba ukuthi ingozi yokuthola i-hairstyle emibi incishisiwe. Ukuhlaselwa kule design kuyindlela elula ekunakekeleni nasekupakheni. Lokhu kukhanda kungadlulela futhi kwelula ubuso, amantombazane amaningi emhlabeni jikelele awashiyi kulokhu kwekhanda iminyaka engaphezu kwengu-12.
Izinzuzo nokungahleki kwezinwele zokukhwabanisa ezithakazelisayo
Abesifazane abaneminyaka ehlukene bayathanda ukugqoka izinwele, futhi bazi, ngoba kunezinzuzo eziningi:
Ikhanda lezinwele lilula ukunakekela. Kwanele ukuba uboya izinwele nge-dryer eyomile, ufake kancane i-wax ukuze udwebe ngezingqimba, ufafaze izinwele nge-varnish, futhi isithombe esihle sikulungele. Ngaphezu kwalokho, ama-curls amancane azoba mkhulu kakhulu.
I-Cascade (izithombe zezinwele zezithombe zingabonakala kulesi sihloko) iyakwazi ukuvuselela ukubukeka kwanoma yimuphi owesifazane, okwenza ibe mncane futhi kuthandane kakhulu.
Ihambisana ngokuphelele nanoma yimuphi umbala wezinwele. I-cascade izobukeka ngokunjalo ngokufanayo kuma-blondes, ama-brunettes kanye nokuhleleka. Ngaphezu kwalokho, ungakhetha wena izitha zangempela - u-ombre, umbala, ukugqamisa, njll.
I-haircut ibukeka kahle nge-bang futhi ngaphandle kwayo.
Ukusebenzisa i-cascade, ungakwazi ukulungisa ukuma kobuso. Isibonelo, ubuso obuqondile bungabhalwa, ngemuva kokukhipha izinwele ezinjalo futhi ukuwugcwalisa nge-slanting bang.
Futhi nakuba i-cascade iyisisombululo esihle kakhulu futhi esiphezulu sabesifazane abaningi, noma kunjalo, kunezimo ezibucayi ngaleli hairstyle. Ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina, udinga ukuqonda ngokuningiliziwe ukuthi i-cascade iyini, futhi uthole ukuthi yiziphi izithiyo ezingenayo:
Ukukhanda izinwele nge-bang akufanelanga nomnikazi wobuso obuyindilinga, kuzokwenza kube ngaphezulu nxazonke.
Izinwele zingazikhukhumeza. Lokhu kwenzeka lapho ama-curls esesimweni esibi, ivolumu eyengeziwe ibonakala engavamile. Ngaphambi kokuya kumuntu wezinwele kungcono ukwelapha izintambo ezinomile nezomile.
Ubani ozothola izinwele?
Ukunquma izinwele kufanelekile cishe wonke umuntu. Kubonakala kuhle kakhulu kubesifazane abanesimo esingenasimweni. Ukukhanda izinwele kulokhu kukwazi ukwenza ubuso bube nobungqingili obunamathele futhi obushelelekile.
Kungcono ukunqunywa izinwele ezinjalo ukunqaba abanikazi bezinwele ezinzima futhi eziqinile. Uma kungenjalo, kuzodingeka usebenzise i-mousse ne-foam nsuku zonke ukuze ubhebhethele ukukhiya okukhazimulayo. Kulesi simo, kufanelekile ukucabangela ukuthi ukusetshenziswa kwansuku zonke kwenzakalo kuyingozi kakhulu izinwele.
Gwema ukusika isikhunta kuyadingeka kulabo abanezinwele ezinzima kakhulu. Izikhiye ezinjalo azikwazi ukugcina ukuma okufunayo, kulokhu kungcono ukhethe izinwele zokunquma eziqondile, kungenzeka nge-asymmetry.
Izinhlobonhlobo zemfashini ngezingoma
Noma yikuphi ukuhluka kwe-bang okufika ngokugcwele ngaphansi kwe-hairdress ye-cascade izinwele, izithombe ezinikezwe kulesi sihloko, yilokho kuvuma. Umnikazi wesimo sebuso obunxantathu nesine-oval uvumelane ne-bang ngaphansi kwamashiya, ngaphandle kwalokho, uyakwazi ukwenza ukubukeka kungene kakhulu. Kodwa-ke, kungcono ukungenzi ubukhulu kakhulu, ngoba ngeke kuhlanganiswe nezinwele zezinwele.
Ngokuvumelana ngokuhambisana ne-cascade ne-bangs ngesimo se-arch. Siyabonga, ungakwandisa ubujamo obusweni bese wenza i-elegant ibaluleke kakhulu futhi ingavamile.
Ngaphezu kwalokho, ungakhetha inguqulo ehlanganisiwe yama-bangs, ngoba ihambelana kahle ne-cascade. Kungaba nje umzamo wokukhulisa i-bang noma umqondo okhethekile we-stylist. Ingahlukaniswa zibe izingxenye ezimbili futhi igcwaliswe yizindlebe noma ibekwe eceleni. Izinguquko ziningi, ungazama futhi uhlale uzibeka ngendlela entsha.
Indlela yokubhala izinwele
Uma uqonda ukuthi i-cascade iyini, futhi ukhethe lokhu kunquma, kodwa ungazi ukuthi ungayifaka kanjani, khona-ke amathiphu ambalwa azokuzuzisa. Okuncane nje kokungafani nokuqamba, futhi izinwele zizofakwa ngokushesha, kahle futhi kalula. Ngisho nezinwele ezimfushane, ungadala izithombe zangempela ezingcolile.
Izitayela ezithakazelisayo ngezandla zakho:
Amapulangwe nsuku zonke. Yenza isithombe sibe sesithandana futhi sithande kakhulu ngosizo lensimbi yokugubha ekwenzeni ama-curls kanye nejel for styling. Uma izinwele ziphakathi nendawo ubude, kufanele zihanjiswe ngenduku yokubopha. Ukuze uphuthumise, faka isikhunta esincane bese usomile ngesomisi oboya izinwele. Umphumela kufanele ulungiswe nge-varnish.
Inguqulo eyisisekelo. Ungadli isikhathi nemali ngokuvakashela i-salon ngaphambi kweholidi. Kuzothatha u-ironing kanye nesitayela kuphela. Udinga nje ukugeza izinwele zakho bese ulishaya ngomile usebenzisa ukuvikelwa okushisayo. Ama-Curls aqondiswe nge-ironing futhi alungise nge-lacquer.
Abesifazane abaningi bemfashini, sebezi ukuthi ukuhlaselwa okunjalo, futhi bahlolisise lezi zinwele, bahlala abalandeli bakhe iminyaka eminingi. Ubukeka behlelekile futhi emuhle, kuyilapho kungekho izinguquko ezesabisayo. Ukuncenga izinwele ngokuvumelana nanyana iyiphi indlela, akudingeki ukwesaba ukuzama.
Indlela asakaze iminduze: izindlela kanye namathiphu